कस्तो रेष्टुरेन्ट जहाँ कपडा उत्तारेर खानेको प्रतिक्षामा २७ हजार छन्
१ द बुनीयादी : सभ्रान्त तथा राजकीय भन्ने लण्डनमा नग्नता भन्ने कुरा मामुली हुन्छ । शहरको पहिलो नेकेड(नग्नता) रेष्टुरेन्ट “द बुनीयादी” शुरु हुन गइरहेको छ । तर कपडा उतारेर खाना खाने ग्राहकको सङ्ख्या हजारौमा छ । मिररका अनुसार यस रेष्टुरेन्टमा खान पर्खनेहरुको सुची २७ हजार छ । यहाँ मानिसले पुर्ण रुपमा नग्न भएर खान पाइन्छ । २.. टिम्बर : द शव स्टेसन सिंगापुरको पहिलो रेष्टुरेन्ट…विस्तृत समाचार »
ट्रीप एडभाइजरले सार्वजनिक गरेको विश्वका १० प्रिय ठाउँ यस्ता छन्
संयूक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन सँघका अनुसार फ्रान्स विश्वमा सबैभन्दा घुमिने ठाउँ हो । विभिन्न सर्वेक्षणका अनुसार पेरिस दुनियाँका पाँच सबैभन्दा घुमिने शहरमा पर्छ तर एफिल टावर घुम्नेहरु भने कमै छन् । १. माचु पिचु पेरु पेरुको १५ ओ शताब्दीको माचु पिचुमा प्रत्येक बर्ष लाख भन्दा बढी यात्रुले इंका गढको यात्रा गर्छन । २.शेख जायद ग्राण्ड मस्जिद केन्द्र (संयूक्त अरव इमिरेट) : ४१ हजार तीर्थयात्री अट्न…विस्तृत समाचार »
बन्दरगाहमा नेपाली झन्डा फरफराउँदै यसरी चलेको थियो पानीजहाज
५ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मात्रै नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना सुनाएका थिए । सामान ढुवानी गर्न नयाँ नाका खोलिने बताउँदै केही समयपछि सरकारले बन्दरगाह आफैँ लिने र सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदा यसलाई धेरैले हाँसोको पात्र बनाए । तर उनले भनेको यो योजना यस भन्दा पहिलै पनि कार्यान्यन भइसकेको थियो । यो कुरालाई बिर्सर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मजाकमा उडाउनेहरुको कमी रहेन । उनले…विस्तृत समाचार »
​उपचार गर्न दिल्ली गएका ठाकुरले उज्जैन पुगेर मोदीलाई भेटे
४ जेठ २०७३
४ जेठ काठमाडौ । उपचारका लागि दिल्ली गएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भारतको उज्जैन पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका छन् । नेपालमा मधेसी र जनजातीहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरीरहेका बेला ठाकुरले मोदीलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ठाकुर मोदीलाई भेट्न दिल्लीबाट उज्जैन पुगेका थिए । काठमाडौं फर्किन्न ठिक्क परेको ठाकुर मोदीसँगको भेटको समय मिलेपछि ठाकुर उज्जैन पुगेका थिए । हाल उज्जैनमा जारी कुम्भ…विस्तृत समाचार »
अमेरिकाले गर्‍यो पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा परिवर्तन
४ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासले पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसाका आवेदकका लागि कागजी प्रक्रिया घटाउने भएको छ। जेठ १९ गतेबाट लागू हुने गरी पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूले भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित हुँदा आवश्यक थोरै मात्र कागजपत्र ल्याए पुग्ने दूतावासले जनाएको छ। आवेदकहरूलाई सम्भावित छलकपटबाट जोगाउनका साथै उनीहरूको पैसा र समय बचत होस् भनी उनीहरूले अबदेखि बैंक मौज्दात विवरण, जग्गासम्बन्धी कागजात, निमन्त्रणा पत्र…विस्तृत समाचार »
​नेपालका सुनखानीमा चीनको आँखा, अवैधानिक रुपले सुन निकाल्दै
४ जेठ, जाजरकोट । नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्धमा पारवहन सम्झौता गरेर नेपाललाई सहयोगका हात बढाएको चीनको भित्री उद्देश्य भने अर्कै रहेको खुलासा भएको छ । चीनले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेको सुनखानीमा आँखा गाडेर नेपालप्रति सहयोगका हात बढाएको खुल्न आएको छ । यसको उदाहरण हो जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा नजिकै धल्ला स्थित भेरी नदीको बगरमा अनुमति विना सुन खानीको खोजतलास गर्नु । चीनले अनुमतिविना सुनाखानी खोजेपछि स्थानीय…विस्तृत समाचार »
यसकारण संकटमा पर्यो राजेश हमालको दाम्पत्य जीवन
४ जेठ, काठमाडौं । दुई वर्षपहिले विवाह बन्धनमा बाँधिएका नेपाली चलचित्रका चर्चित नायक राजेश हमालको दाम्पत्य जीवनमा दरार आएको छ । दाम्पत्य जीवनमा आएको खटपकै कारण हमाल यतिवेला मधुलाई छाडेर अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । प्रायः मधुसँगै अमेरिका जाने हमाल यतिवेला एक्लै अमेरिकामा छन् । मे १२ तारिकमा नेपाल फर्कन योजना बनाएका हमाल पत्नीकै कारण नफर्केको अमेरिकामा रहेका उनका निकटस्थले बताए । हमाल र भट्टराईबीच…विस्तृत समाचार »
पहिचान माग्नेले कहिल्यै पाएको अधिकार हेरेका छन् ?
एलिजा उप्रेती मधेसबाट शुरु भएको आन्दोलन अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छ । मधेसबाटै आफ्नो मागप्रति झुक्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछौ भनेका मधेसीमोर्चा अन्तत सरकारलाइ झुकाउन सफल भएनन् र काठमाडौ छिर्नुको विकल्प देखेनन् । आन्दोलनलाई भड्किलो , हिस्रंक र जनताको गाँस वास खोसिने खालको बनाउँदा जनता त्यसको साथमा हुदैनन् भन्ने प्रत्यक्ष देखेका मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् उनीहरुलाई साथ दिदै आदीवासी जनजाती पनि अधिकार…विस्तृत समाचार »
संविधानमा चित्त नबुझाउनेले संविधान हेर्ने की ?
एलिजा उप्रेती मधेसबाट शुरु भएको आन्दोलन अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छ । मधेसबाटै आफ्नो मागप्रति झुक्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछौ भनेका मधेसीमोर्चा अन्तत सरकारलाइ झुकाउन सफल भएनन् र काठमाडौ छिर्नुको विकल्प देखेनन् । आन्दोलनलाई भड्किलो , हिस्रंक र जनताको गाँस वास खोसिने खालको बनाउँदा जनता त्यसको साथमा हुदैनन् भन्ने प्रत्यक्ष देखेका मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् उनीहरुलाई साथ दिदै आदीवासी जनजाती पनि अधिकार प्राप्ति…विस्तृत समाचार »
​गरिबका छोराछोरीबाट चर्को शुल्क अशुल्दा हामी किन चुप लाग्ने ? -सेक्रेटरी अग्नी
मिलनप्रकाश ढुङ्गाल, कञ्चनपुर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ एक दशक शशस्त्र जनयुद्ध लडेर एक दशक अघि शान्ति सम्झौताको बुइ चढेर खुला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट भएर पाँच छ पार्टीमा विभाजित भए । एक माओवादीले अर्को माओवादीलाई सिध्याउने लज्जास्पद खेलहरु पनि भए । र अहिले एक थरी माओवादीहरु जनयुद्धबाट पा्रप्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण दिईरहेको बताउदै सत्ताको स्वादमा मदहोसी देखिन्छन भने अर्को थरी…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 999 1000 1001 1002 1003 Older Last ›